Imfundiso emikhulu ka-Feng Shui yithonya kubantu bendawo, ikakhulukazi - amandla amandla ka-Qi, leli gunya lihamba kunoma iyiphi indawo lapho kukhona khona umuntu. Akufanele kube khona izithiyo zokusakaza kwamandla ahle. Ngakho-ke, ekhaya lakho kufanele kube khona isikhala esikhululekile, ngaphandle kwalokho ubungozi bokushintsha amandla omuhle ube yinto engafanele. Ekuqaleni, udinga ukuhlanza indlu yakho engalungile, ngaleyo ndlela uyilungiselele umthelela we-Qi.
Indlela yokulungisa indlu yokuhlanzwa nguFeng Shui?
Ifilosofi ye-Feng Shui ihlanganisa ukuguqulwa kwamandla esikhala, okuhlanjululwe ngaphambilini. Sula isikhala sekhaya lakho, ngokwesibonelo, ususe izinto eziphukile nezingadingekile, uhlanza indlu futhi uphume endlini ngekhandlela elimnandi le-feng shui. Okokuqala, hlambulula ikona ngayinye yendlu, bese ulahla amandla ahlukahlukene ahlukene, ukuze amandla ajikeleze futhi angaphazamisi izithiyo.
Indlela yokuhlanza indlu nge-Feng Shui?
Isigaba sokuqala ukuhlanza ngokuphelele
Lindela inyanga ekhulayo, lesi sikhathi sihle kakhulu ekuvuneni. Lo mthetho ungasetshenziswa nje kuphela ukuhlanza indlu, kodwa futhi ukuhlanza indawo yakho yokusebenzela. Akunconywa ukuhlanza inyanga entsha noma inyanga. I-Masters feng shuiuvereny yokuhlanza, eyadlula inyanga ekhulayo, iphumelela kangcono, i-akistota izohlala isikhathi eside, ukuhlanza ngeke kube nzima kakhulu futhi kuyashesha.
Inkathi lapho inyanga iyancipha, izoba kufaneleka ukuhambisa nokumisa umbhede, ama-mattresses, imilenze nezingubo zokulala. Kusesekudala kakhulu, abantu bazama ukwenza umbhede omoya ohlanzekile, ukususa umbhede wetholi lothuli namandla amakhulu. Okhokho bethu, amaSlav, abaqaphela umcimbi okhethekile, baletha imibhede kanye nelineni egqumeni, beshiya lezizinto kubonkulunkulu ukuba bazihlanze kumuntu omubi futhi wabanika amandla othando nempilo.
Imithetho okufanele ibonwe lapho ihlanza
Akwanele nje ukuhlanza isikhala sakho sokuphila, into esemqoka ukukwenza kahle. Awukwazi ukuphindisela emnyango, kunenkolelo yokuthi uma ufikela emngceleni, ungasusa inhlanhla, inhlalakahle, futhi ucele isikhalazo. Impindiselo iyadingeka ekuqondeni kwekhishi.
Asikho isidingo sokuqala ukuhlanza lapho imikhosi ifika, ngoba ngalezi zinsuku isibhakabhaka sivula futhi sikhulule amabutho angelosi kanye namandla aphezulu emhlabathini, okungaba ngesabisa ngezandla zobulili. Hlanza ngokuqinile kumaholide angokwenkolo, ngakho-ke ungalungisa indawo yakho yokuhlala ngokugcwele ngamandla aphezulu aphezulu.
Ngisho nasezindlini ezicebile kakhulu nezanamuhla, umshanelo owodwa udinga ukugcinwa. Yigcine nge-whisk. Uma umshanelo ubheke phansi, ukuzinza kwezimali kwehla.
Ukuqubuka kokhokho kwakuyisibonakaliso esiqine kakhulu sokuvikelwa. Ungathenga umshanelo omncane wesikhumbuzo bese uyifaka emgodini noma ekhishini. Imifudlana enjalo ingathengwa kunoma iyiphi i-souvenir shop.
Hlola indlu bese uhlanza izinto, shiya kuphela lezozinto ezidingekayo futhi ezithwala amandla. Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi asikwazi ukuqeda izinto ezingamnandi futhi ezingathandeki kuphela ngoba othile usinike zona. Akufanele ugcine izinto endlini yakho ongazidingi. Uma uhlonipha kakhulu umuntu obanike wona, ukuthi awukwazi ukuwaqeda nje, uzinikele isikhathi esithile, emva kwalokho uzokhipha isipho, ungazisoli. Kumele uqonde ukuthi awudingi ukugcina izinto ezinzima.
Isigaba sesibili sokuhlanzwa yi-fumigation yendlu ngekhandlela elimnandi
UFeng Shui uthi ukuphunga kwendlu kubaluleke kakhulu, izindlu kumele ziqede amafutha amnandi. Imfundiso emikhulu ekuhlanjululeni isebenzisa ama-herbs omile, amakhandlela anamehlo noma izinti.
Umhlonyane nomjunipha yizinye zezitshalo ezihle kakhulu zokuhlanza indlu. Ngisho nabokhokho bethu abakude babagcina. Esikhathini sethu, impepho kanye nokusetshenziswa kwe-sandalwood nempepho isetshenziselwa ukuhlanzwa okuphelele. Kodwa uma uthanda ezinye iphunga, ungakhathazeki, sebenzisa lezo ezithandayo kuwe. Ngemuva kokuthi ususe ikhaya lakho, ungagcwalisa inqubo ngokufafaza indlu ngezingcwele. Uma ingekho, sebenzisa amanzi ahlanzekile ajwayelekile.
Khetha indlela efanele futhi ngokushesha uqale ukuhlanza indlu. Qala ngombundu, kancane kancane uhambahamba eduze kwendlu, kodwa kuphela ngokushelela futhi uvale kancane kuzo zonke izingqimba.
Abanye abantu abathandi iphunga elibukhali lempepho. Uma unalo leli cala, sebenzisa ukuhlanzwa kwe-aerosol emakamelweni. Ngokuqinisekile uzodla ukunambitha iphunga lamafutha abalulekile, akunjalo ngokuphelele, lilungiswe ngamamitha ayizigidi wamanzi ukufaka amaconsi amafutha noma i-oli yamafutha. Ukuze uhlanze indlu ngale ndlela, udinga ukuhamba kude nombundu wesondo nge-sprayer, ume lapho u-golly bese uphefaza oketshezi okungenani kathathu.
Isinyathelo sokugcina sokuhlanza
Zithokoze ngenxa yezenzo ozithathile futhi uvuselele indawo yakho yokuhlala ngokuhlanza, uzilungiselele ekungeneni mahhala kwe-Chi energy. Ake ucabange ukuthi usakazeka kanjani emakamelweni futhi unikeza ukuthula ekhaya nokududuza. Imicabango yakho izozwakala nomkhathi ekhaya!
Futhi okwedlule - zihlanzeke, ngoba amandla amabi angakwazi ukuhlala kumuntu ngokwakhe. Akukho lutho okumangalisa kulokhu - nje ugeza noma ishaja, zilungiselele ukuze nge-drop drop ngayinye futhi amandla amabi azoshiya indlu yakho yonke!
Isigaba samakhosi: amabhokisi amahle okugcina izinto wena ngokwakho
UGanesha - unkulunkulu waseNdiya wobuningi nokuhlakanipha ku-feng shui
Izintshebe zikaTeddy eziluhlaza
UBelly ukudansa ngamafutha
Sakha i-dessert kaKhisimusi ngezandla zethu: amakilasi aphezulu nesithombe
U-Angelina Jolie - owesifazane ovelele kakhulu eminyakeni eyishumi
Ama-pancake ne-apula ngamasinamoni
Indlela yokukhetha i-fondyushnitsu enhle?
Indlela yokuziphathisa nomuntu oshayayo
Ingabe kufanelekile ukuthembela ekukhangiseni futhi uchithe imali eningi ngezindlela zokulahlekelwa isisindo?
Ukwelashwa kokuvuvukala kwama-appendages kwabesifazane
Izakhiwo eziwusizo ze-salmon roe
Ukukhishwa kwekhwalithi ekhaya
Ama-carbohydrate, lapho uthola khona isisindo
U-Evgeny Tsyganov noYulia Snigir banquma ukushada
Amaprosesa ama-pores aseqophelweni eliphezulu
Yeka ukuthi imfashini kanjani ukugqoka lokhu kuwela: 3 izitayela ezikhanyayo-2017-2018 zezingubo zansuku zonke
Kuyini i-Natural Cosmetics?
Inkanyezi ekhulelwe "Indlu-2" UNelli Ermolaeva wacabanga ngokubeletha ... ngamahlengethwa